Sapiens (Gorfayn) – Kaasho Maanka
Qirashada jahliga iyo aqoon la’aanta (Ignoramus) ayuu qoraagu ku nuux-nuuxsanayaa in ay ahayd sirta ugu weyn. Markii ay ku dhiirradeen in ay yiraahdaan: “waxba garan mayno” ayay bilaabeen in ay waxa ka maqan raadiyaan. Dhaqan-aqooneedkii hore sida Islaamka, Masiixiyadda, Yuhuudda, Budhism-ka waxa ay qirsanaayeen in waxkasta oo muhiim ah oo ay ahayd in laga ogaado dunida, horayba loo ogaaday.
Tusaalayaasha uu adeegsanayo qoraaga waxaa ka mid ah, in muslimiinta markii ay qabsadeen Hindiya aysan halkaasi u tagin in cilmi ka maqan ay kasoo helaan oo ay halkaasi u tageen uun in ay gaarsiiyaan farriin, ayna isku arkayeen kuwo xaqiiq iyo run dhamaanteed ayaga u sugnaatay. Halka markii ay Biritishku qabsadeen Hindiya ay bilaabeen waxa loo yaqaano, “Baaristii ama Sahmintii Weynayd” taas oo socotay 60 sanadood, ahaydna sahmin cilmi.
Sidoo kale, kolkii uu helay qaaradda Ameerika, Christopher Columbus laftigiisu waxa uu ku dhacay qaladka ah in uu qiran waayo jahliga, waxa uuna ku qanacsanaa in uu garanayo dunida oo idil, sidaas daraadeedna dhulkan uu tagay waxa uu u arkayay in ay yihiin jasiiraddo Japan ah. Amerigo Vespucci oo laftigiisa sahmiyay dhulkan cusub Columbus dabadii, ayuu ahaa ninkii ku dhiirraday in uu yiraahdo, waxba garan mayno, waxa aan hadda ogaanayna waa qaarad dhan oo aynaan horay u aqoon, sidoo kalena uusan Baybal-ku garanayn.
QORMO LA XIRIIRTA: Hidde-Sidaha danaystaha ah iyo Noolaha Nafhurka badan
Markabka HMS Beagle
Galbeedka Yurub waxa ay ku dhiirradeen in ay raadiyaan waxa ka maqan oo waxa ay dardar geliyeen sahminta iyo dirista maraakiib ku shaaximan cilmi baareyaal iyo aqoonyahanno. Tusaalena waxaa loo soo qaadan karaa markabkii HMS Beagle ee ay saarnaayeen sahmiyayaashu oo uu ka mid ahaa Charles Darwin. Waxaa jiray maraakiib sahmin oo u shiraacday dhanka Cirifka Waqooyi ee Dhulka oo aanan dib u soo laaban illaa maantana aanan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Waxani oo idil sababta ay u dhacayeen waxa ay ahayd uun, waxba garan mayno ee aan daydayno waxa innaga maqan.
Muslim-ka badankii illaa maanta waa ay aaminsanyihiin fakarka ah in wax walba oo cilmi ah uu Allaah ugu sheegay Qur’aanka iyo Xadiista, wax ka maqan oo uu Allaah ka hagradayna aysan jirin. Arrintani waa seef laba af leh, oo Islaamka uun ayaa laga helaa in marna la yiraahdo, cilmi baa naga maqan, marna daahfur walba oo ay sameeyeen dad dadaalay la yiraahdo, horay ayaa Qur’aanka la innoogu sii sheegay. Bal adba!
Cilmigu waxa uu nagu jiheeyaa in aan ku noolaan karno meel ka baxsan dhulka oo aan noqonno kuwa iskaga kala goosha diilimooyinka (galaxies), halka ay diimuhu nagu jiheeyaan in aan sugno qiyaamaha iyo inta dhulku nala halaagsamayo. Cilmigu waxa uu nagu jiheeyaa in aan ka guulaysan karno geerida, halka ay diimuhu inoo sheegaan in geerida aan u diyaar garowno oo aan xisaab dhimashada ka dib ah u feejignaano.
Halkan ka dajiso buugga Sapiens ee Yuval Noah Harari
Aslam alleykum m.a buugan waa buug wx laga faaiido karo lkn mala helayaa asigoo afsomali lagu turjumey….
Waa ka xumahay, inta aan ka warhayo ama raadiyay ma jirto waqtigan nuskhad afka soomaaliga ah balse afaf badan oo kale ayaa lagu tarjumay
Wll WD mhdsn tahay ee ma ii soo tilmaami kartaa buug kale oo sayniska oo Ku saabsan cilmiga xidigaha
Tan iyo goortii insaanku bilaabay in ay eegaan kana fakaraan hawada sare, waxa ay aaminsanaayeen in Dhulku yahay midka ugu muhiimsan dunida, dhamaan walxaha kale ee ay ishu qabatana yihiin kuwo ka yar Dhulka. Waxa ay u arkayeen Dhulka mid fidsan oo aan dhaqaaq samayn oo ay Cadceedda iyo walxaha kaleba dul heehaabaan, sidii aqal soomaali oo kale, halkaas oo uu Dhulku fidsanyahay, cirka oo ah walax...
W/Q: Gallad Gurxan 29th January 2020